WARQADDA-SAMAYNTA - Shiinaha Shandong Yulong cellulose
WARQADDA-SAMAYNTA cellulose carboxymethyl Sodium (CMC) waa wakiilka ah papermaking sare hufan. Its xal aqueous wuxuu leeyahay sifooyin u fiican sida xafidista biyaha, film la xirrira, xasiloonida, saxarka buuna fiber iyo Amda, taas oo ka dhigi fiber warqad ay fududahay in la xididka ah, dhammaan noocyada kala duwan buuxiyo waxaa ka badan siman qaybiyey saxarka iyo hagaajiyo midayso ee warqadda. Codsiga waxaa warqad dahaarka koontarooli karaan rheology ee daahan iyo kala firidhsan of Midabka ah. nidaamka daahan waa xitaa ...
Cellulose carboxymethyl Sodium ( CMC ) waa wakiilka ah papermaking sare hufan. Its xal aqueous wuxuu leeyahay sifooyin u fiican sida xafidista biyaha, film la xirrira, xasiloonida, saxarka buuna fiber iyo Amda, taas oo ka dhigi fiber warqad ay fududahay in la xididka ah, dhammaan noocyada kala duwan buuxiyo waxaa ka badan siman qaybiyey saxarka iyo hagaajiyo midayso ee warqadda.
Codsiga waxaa warqad dahaarka koontarooli karaan rheology ee daahan iyo kala firidhsan of Midabka ah. nidaamka daahan waa xataa iyo mid deggan, daahan waa siman iyo gloss, iyo waxa uu leeyahay film sameynta hanti wanaagsan.
In geeddi-socodka qiimaynta dusha, xoog iyo macaanaa warqad loo wanaajin karo, xoog iska caabin ah ay xirtaan, macaanaa iyo dusha sare ee warqada waa sii korodhay, hantida nuugista khad ah loo wanaajin karo iyo tayada daabacaadda la soo hagaagtay.
In qiimaynta codsiyada, CMC xoojiyo ciidamada xiisadda iyo lagala kulmo macdantaa ah, iyo in la wanaajiyo xoog iyo qalleyf. Kordhi heerka xafidista daro kala duwan, buuxiyo iyo macdantaa yar.
fasalka Paper-qaadasho lagu daydo CMC: PL-5, PL-10, PL-20, PL-30, PL60, PL100
Next: Industry cadayga